မျောက်​လက်​​ရောက်​ အုန်းသီးက​လေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ​မျောက်​လက်​​ရောက်​ အုန်းသီးက​လေးများ
Posted by naywoon ni on Mar 11, 2014 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 16 comments
နေဝန်းနီ- ကိုယ်​​တွေ့ မှတ်​တမ်း
မှတ်​​လောက်​သား​လောက်​ စကားတစ်​ခုပါ ​မျောက်​လက်​အုန်းသီးရသလိုဆိုတာ ။ ​မျောက်​ဆိုတာက ငြိမ်​ငြိမ်​​နေတတ်​တဲ့ သတ္တဝါ မဟုတ်​ ။ လက်​ထဲ​ရောက်​လာတဲ့ အုန်းသီးလည်း ခွဲမစားတတ်​ လွင့်​ပစ်​ရမှာလည်း ၀န်​​လေး ဟိုဘက်​လှည့်​ကြည့်​ ဒီဘက်​လှည့်​ကြည့်​ အချိန်​​တွေသာကုန်​လာတယ်​ ။ အကျိုးဖြစ်​ထွန်းမှုက မရှိ ။ အုန်းသီးပိုက်​ထားရ​ပေမယ်​လို့ ခွဲမစားတတ်​​တော့လည်း ​ဖောင်​စီးရင်​ ​ရေငတ်​ငတ်​​နေသလိုမျိုး ။ တည့်​တည့်​​ပြောမယ်​ဗျာ ​ဝေ့လည်​​ချောင်​ပတ်​​ပြော​နေရတာ အားမရဘူး ပွင့်​လင်းမြင်​သာ​ခေတ်​မှာ နမိတ်​ပုံ​တွေ သ​င်္ကေတ​တွေနဲ့ အုံးမစား​ရ​အောင်​……။ ခု ကျုပ်​တို့လက်​ထဲမှာလည်း အုန်းသီးတစ်​လုံးစီနဲ့ဗျ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ လက်​ထဲ ဟမ်းဖုန်းတစ်​လုံးစီ ကိုင်​ထားကြ​ပေမဲ့ ဘာများတွင်​တွင်​ကျယ်​ကျယ်​ လုပ်​နိုင်​ကြလို့လဲ ။ ​သေချာစဉ်းစားကြည့်​ကြစမ်း​ပါ့ ။ ဖုန်းနဲ့ အကျိုးဖြစ်​ထွန်း​အောင်​ ဘာ​တွေ လုပ်​နိုင်​​နေပီလဲ ။ အဲ့ ဖုန်းနဲ့ အားမရ​တော့ သူများ အင်​တာနက်​ဆို​တော့ လိုက်​တပ်​ ။ အဲ့လိုလူမျိုးကျ အုန်းသီး နှစ်​လုံး လက်​ထဲ​ရောက်​​နေတာ ။ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ သိပ်​ဟုတ်​လှပြီ​ပေါ့ ။ ထင်​မ​နေနဲ့ ဖုန်းမှာတင်​ထားတဲ့ ​ဆော့ဝဲလ်​ ဘယ်​​လောက်​ကျွမ်းကျင်​​အောင်​သုံးတတ်​​အောင်​​လေ့လာပြီးပြီလဲ။ စဉ်းစားလိုက်​ဦး ။ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​သုံးနိုင်​တာ သတင်းအတိုအထွာ ​လောက်​ဖတ်​နိုင်​တာ​လောက်​နဲ့​ကျေနပ်​​နေမှာလား ။ ဖုန်းတစ်​လုံးမှာ အင်​တာနက်​ ချိတ်​လိုက်​တာ အဲ့ဒိ​လောက်​ပဲ ရလိုက်​တာဆိုရင်​ ကုန်​ကျမဲ့ ​ငွေ​ကြေးနဲ့ အချိန်​​တွေအတွက်​မတန်​ဘူး​နော်​ ။ ​သေချာစဉ်းစားကြည့်​ကြဦး ။ ဟုတ်​လား ။ ဗိုက်​ဗာ သူများတတ်​လို့လိုက်​တပ်​ ။ အင်​တာနက်​ချိတ်​ပီးမှ​တော့ ဗိုက်​ဗာမှမရှိရင်​ ရှက်​စရာကြီး ဟုတ်​ပါပီ ။ အဲ့ဒါကြီး တပ်​ပီးပါပြီတဲ့ ဘယ်​​နေရာသွားသုံးမလဲ ။ အကျိုးရှိ​အောင်​ အသုံးချတဲ့သူနဲတယ်​​နော်​ ။ ကိုယ်​လဲဒီလိုပဲ ။ အရင်​က အင်​တာနက်​သုံးချင်​ရင်​ ဆိုင်​သွားသုံး ဂျီ​တော့ နဲ့​မေးလ်​​လောက်​ ကိုယ်​စိတ်​၀င်​စားတဲ့ ၀က်​ဆိုဒ်​ သုံး​လေးခု​လောက်​ဖွင့်​ကြည့်​ ။ စာအုပ်​​တွေဘာ​တွေ ​တွေ့ ​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲ မင်​မိုရီ စတစ်​နဲ့ သိမ်း ဒါ​လောက်​ပဲ ။ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ဆိုလို ဆယ်​ခါသွားထိုင်​ ဖွင့်​ကြည့်​ဖြစ်​ရင်​ အလွန်​ဆုံး သုံး​လေးကြိမ်​ ဒီထက်​မပိုဘူး ။ အင်​တာနက်​ဆိုင်​မှာထိုင်​တတ်​​တော့ ​တွေ့ရာ ၀က်​ဆိုဒ်​ ​တွေ့သမျှ လင့်​ခ်​ အကုန်​၀င်​ကြည့်​ဖူးတာပဲ ။ ယဟူး တွစ်​တာ လာမ​ပြောနဲ့ အကုန်​ ၀င်​ထားတယ်​ ။ ဘ​လော့စ​ပေါ့ ကိုယ်​ပိုင်​ ရှိတယ်​ ။ ning.com ​တောင်​ ​ငွေသွင်းဖို့ ခက်​လို့ အဖျက်​ခံလိုက်​ရတာ ။ မာတီပလိုင်းက​တော့ သူ့ဖာသူ ပျက်​သွားတယ်​လို့ဆိုတယ်​ ။ ဒီ​လောက်​ပဲ ။ ကဲ ခု ဖုန်းနဲ့သုံး​တော့ ဘာကွာလဲ ။ အက်​ပလီ​ကေးရှင်းနဲ့ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ပဲ​ရောက်​​နေတယ်​။ ဟိုတုန်းက ကိုယ်​ကပဲ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ထဲ နှံ့စပ်​​အောင်​မသွားလို့လား ဘာလား​တော့မသိဘူး ။ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​က ​ကြောက်​စရာ ခု​လောက်​မ​ကောင်းဘူး ။ ခု​တော့ အင်​တာနက်​​ပေါ်က လင့်​မှန်​သ၍ ​ဖေ့စ်​လုတ်​ထဲ ​ရောက်​​နေ​တော့တာပဲ ။ ဟိုတစ်​ချိန်​က ပ​ရောက်​စီ ​ကျော်​ခွပြီးဖွင့်​မှ ​ရောက်​တဲ့ ဟာ​တွေက ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ထဲ ၀င်​လိုက်​တာနဲ့ အပြိုင်းအရိုင်း ။ ​အော်​ ​မျောက်​လက်​ထဲ ​ရောက်​လာတဲ့ အုန်းသီး ​တွေ အပုတ်​​တော့ မခံဘူး ဆိုတဲ့သ​ဘောနဲ့ ကိုယ်​နဲ့ တန်​ရာ တန်​ရာ သုံးကြ​လေသတည်း ​ပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့ စက်​ပစ္စည်း​တွေ​တော့ရှိပါရဲ့ နည်းပညာ မရှိ ။ မသိ ။ သိ​အောင်​လည်းမကျိုးစား ။ ​မျောက်​လက်​ထဲက အုန်းသီး​လေး​တွေမှာ ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ထဲ ဟိုဟာ ဒီဟာ ၀င်​အကြည့်​ခံရ ။ ဗိုက်​ဗာက အ​ရေးမပါ တာ မက်​​ဆေ့ ပို့​ပေးလိုက်​ရ ဖုန်းလိုင်း​ပေါ်က ထမင်းစားပြီးပီလား မင်းဘယ်​​ရောက်​​မေတာလဲ ​မေး​ပေးလိုက်​ရ ။ နုတ်​ စု ​တွေမှာလဲ ​ဘောလုံးပွဲ ​ပေါက်​​ကြေးတို့ နှစ်​လုံး သုံးလုံး ဂဏန်​တို့ မှတ်​​ပေးလိုက်​ရ ။ အင်​တာနက်​​လေး ခမြာလည်း ​ဘောပွဲရလာဒ်​ တို့ ထွက်​သွားတဲ့ ဂဏန်​တို့ သတင်း​ပေးလိုက်​ရနဲ့ သနားစရာ ​ကောင်းလိုက်​ပုံများ​ပြောပါတယ်​ ။
(မှတ်​ချက်​။ ကိုယ့်​ အ​ကြောင်းကိုယ်​ ​ပြောခြင်း ဖြစ်​ပါတယ်​ တိုက်​ဆိုင်​မှု ရှိလျှင်​ ​စောင်း​မြောင်း​ပြောဆို​နေတယ်​လို့မမှတ်​ယူကြပါနဲ့ ဒဲ့​ပြော​နေတာ လို့သ​ဘောထားလိုက်​ပါ။
ဆြာနီရဲ့… ဟန်းဖုန်းပေါ်ကာစ ရုံးကထုတ်ပေးတော့ ခလောက်လို့ ခေါ်ကြတယ်…
အခုတော့ ပိုက်ဆံစားတဲ့စက် ဖွတ်တက်သလိုပဲ… တဲ့
“ဟဲလို… ဟဲလို… ကြားလား… ကြောင်လား…” နဲ့ ရှိသမျှလေးတွေကုန်ရော…
အဲ့ကြားထဲ အခိုးခံရ/ကျပျောက်ရင် ကိုယ့်စီးကရက်လေးတွေပါ ရေစုန်မျော…
ဒါပေသည့် မပြတ်နိုင်သေးတာမို့ စကားပြောဖို့ကလွဲရင်… ဘာမှမသုံး…
“တူ” ဆိုတဲ့ ခေါ်သံမကြားရသေးပဲနဲ့ “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းသည်သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မပြုသည့်အတွက်….”
အဲ့လို မတတ်ဘဲ လျှောက်ကလိလို့
ပျက်ခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲ့ဘီ ….
သုံးစတုန်းကတော့ မင်းမရှိရင်အသက်မရှင်ဂျင်ဘူးအဂျစ်ရယ် ဆိုရပေမယ့်
ကြာလာဒေါ့ ဝေးလေကောင်းလေဘဲ ဖြစ်သွားပြန်ရော
ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အခါကြတော့လည်း ရည်းဇားစိစိမစိစိကွယ် ငါဂဂျစ်မှာဘဲ
ဖုန်း လေး နဲ့ ဟို စမ်း ဒီစမ်း လုပ် တာ ဘဲ ဗျ
ဒါ ပေ မယ့် အ၀ိုင်း လေး လ ည် နေ တာ နဲ့ ဘဲ လှည့် ပြန် ခဲ့ ရ တာ များ တယ် လေ
ကျုပ်​တို့အရပ်​က​တော့ စိဖုန်း တဲ့ ဖွတ်​ဖုံးတဲ့ ဗျ ​ခေါ်ကြတာ အဲ့ဖွတ်​ဖုန်းဆိုတာ​လေး အ​ကြောင်း အချိန်​ရမှ​ရေးဦးမယ်​
မရှိမကောင်း ရှိမှကောင်း ဆိုတဲ့အထဲ ထည့်ရတော့မပေါ့ အဘနီရာ
ကျနော်တော့ ဖုန်း အင်တာနက်ထည့်ပြီးကတည်းက
ဂဇက် ရွာထဲ အားရင် အားသလို ဝင်မိတာပဲ
ကျန်တာတော့ ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ဗိုင်ဘာကလွဲရင် မသုံးတတ်။
သူများ ဖုန်းထဲ အင်တာနက်လျှောက်ရင် ခေတ်မမှီဘူး အထင် ခံရမှာ စိုးပြီး . .လိုက်လျှောက် . . .
ရတော့ ဘာမှ မသုံးတတ်။
အင်တာနက်ဆိုတာဘာညာဘာညာတွေ ရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ သိတဲ့သူတွေနဲ့
အင်တာနက် သုံးတယ် လို့တောင် မပြော
အင်တာနက်ဆိုတာ အပျင်းပြေကစားတဲ့အရာကြီး ဖြစ်လို့ 
ဖုန်း+ အင်တာမဲ = အိမ်တွင်းသူခိုးးးး
အနော် ဖုန်းစကိုင်တုန်းကတော့ စိန Java နဲ့တိုးတယ်ဂျ သို့ပေသိ ဘက်ထရီဘယ်လောက်သွင်းသွင်း ကြာကြာမသုံးရတော့ ဘက်ထရီကလည်း ဖြုတ်မရတပ်မရနဲ့ ပစ်လိုက်ရတာ ဦးဦးဖျားဖျားပဲဂျ
Android နဲ့မှပဲ အနည်းငယ်အဆင်ပြေသလိုရှိတော့တယ်ဂျ
အနော် အင်တာနက်သုံးတတ်ခါစက ဦးနီပြောသလိုပဲ ဟိုစာမျက်နှာဖွင့် ဒီစာမျက်နှာဖွင့်နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တာများတယ်ဗျ။ ပြီးမှ အကောင့်တွေ ဘာတွေဖွင့်လာသည်ပေါ့ဂျာ
ဆရာ နေ၀န်းနီ (ဖားထားရတာ . . :-) ) အဲ့ဒါတော့ ထောက်ခံတယ်ဗျာ . . . . . . . မတွေ့ရတာ ကြာတဲ့ ဘော်ဒါတွေ စားပွဲ ဆိုလို့ သွားမိပါတယ် . . . သူတို့ တွေက ဖုန်း တွေကိုယ်စီ နဲ့ ဘာလုပ်နေကြမှန်းမသိ . . ကိုယ့်ဖုန်းက အစုတ် (သိတဲ့ သူတွေ သိပါတယ်) စကားကလဲ . .ကိုယ်ကအတင်းလိုက်ပြောရတယ် . . . . . . . တော်တော် စိတ်လေ သွားဖူးတယ် . . . .။
မြန်မာပြည်မှာ လူအများစု ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်တာ
မျောက်အုန်းသီးရသလိုဖစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အိုက်မျောက်တေက အုန်းသီးကို ကိုင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်နေမှာဘာ
ဆရာနီ့အလိုအရ ၁၅သိန်းတန်ခေတ်ထဲက ဖုန်းကိုင်နိုင်သူတွေ ဖုန်းပြင်မစားတတ်သေးရင် သေသင့်တယ်လို့ ပြောရမလိုဖစ်နေဘီ…ခွိ
သများတို့လက်ထဲကိုတော့ အုန်းသီး ၂ လုံး ၃ လုံးလောက်ကို ရောက်လာစေချင်တာ။
ဘာဘဲပြောပြော အဲဒီ အုန်းသီးလေးကို မပစ်နိုင်သေးဘူး အဘနီ။
ဖုန်းထဲမှာဘာမှမထည့်ထား။ ဗိုင်ဘာတောင်သူများထည့်ပေးထားလို့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ဖုန်းအ၀င်အထွက်ကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်တတ်။ စောင့်ရတဲ့နေရလောက်ပဲ အင်တာနက်ခဏဖွင့်ကြည့်တယ်။ အ၀ိုင်းအ၀ိုင်းတိုးတာများလို့ ခဏပဲပြန်ပိတ်လိုက်ကော။ အခုတော့ နေရာတကာမှာ တချိန်လုံးပွတ်နေကြ တော့တာပဲ။ ဘာတွေပွတ်နေလဲတော့မသိဘူး။ နောက်ဆုံး အတွဲတွေချိန်းတွေ့တာတောင် ဖုန်းပဲပွတ်နေကြတယ်။ တခြားပြုဖွယ် ကိတ်စနေတွေတောင်မေ့နေသလိုပဲ။ အာဟိ
ကျွန်​​တော်​ ဖုန်းမဲမ​ပေါက်​ခင်​တုန်းကလည်း Mလုင်​လို ခံရဖူးတယ်​ဗျ ဒါ​ကြောင့်​ မီးစိမ်း​ပေးပါတယ်​ TNA ​ပြောသလိုပဲ ကျွန်​​တော်​လည်း အားရင်​ပွတ်​ပါတယ်​ ( ဖုန်းကို​ပြောတာပါ) အင်​တာနက်​နဲ့ ချိတ်​ပီး​ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်း​တွေ တစ်​​လှေကြီးထည့်​ထားပါတယ်​ ကိုယ်​တိုင်​လည်​ APP chearch နဲ့ ဂိမ်းရှာ ​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲပါတယ်​ အင်​တာနက်​လိုင်း​ကြောင်​တဲ့ အချိန်​ ဂိမ်းပွတ်​ပါတယ်​ ​မျောက်​များ အုန်းသီးကိုလှည့်​ပတ်​ပွတ်​ကြည့်​​နေသလိုမျိုး​ပေါ့ဗျာ တစ်​ခါတစ်​ခါ ဘာကိုမှ စိတ်​မ၀င်​စား​တော့ပါဘူး ပွတ်​ဖို့ပဲ ​ခေါင်းထဲရှိသလို ဖြစ်​​နေပါတယ်​ ဉာဏ်​ကြီးရှင်​များ အာရုံ လွဲ​ပေးလိုက်​တာက​တော့ ခု​ခေတ်​စကားနဲ့​ပြောရရင်​ ၉ ​တောင်​​ကျော်​လိမ့်​မယ်​နဲ့တူရဲ့ 